Bacda Safar Dalxiis & Soo-saareyaasha - Shiinaha Warshadda Boorsada Safarka
Adduunku ma aha wax la arko, ee waa socod. Boorsada casriga ah iyo moodada safarka ah waxaa laga sameeyay dhar tayo sare leh oo tayo sare leh oo dhar-diid ah, oo ah dhar xiran, cufnaanta sare, neefsashada iyo raaxada. Naqshaddu waxay awood u leedahay inay kaydiso tiro badan oo shay ah sida dharka shaqsiga ah, kombiyuutarrada, mobilada, dalladaha, iwm. waqti.
Boorso boorsada weyn ee safarka safarka shandada safarka shandadaha safarka suunka safarka suunka go'an
Waxaan aaminsanahay inay rakaabku qaadi karaan duulimaadyo badan oo duulimaadyo kala duwan inta ay noolyihiin. Sidaa darteed, waxaan u naqshadeynay xirmo noocan ah oo la ansixiyay, sidaa darteed waxaa aqbalaya inta badan shirkadaha diyaaradaha ee Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo Yurub.
Boorsada gacantu gaaban-gaaban oo boorso-awood weyn leh oo leh boorso booska madax-bannaan boorsada qalalan iyo boorsada jimicsiga kala-baxa dharka qoyan
Miisaan fudud oo la qaadan karo: Boorsada safarka isboortiga waxaa laga sameeyay alaab tayo sare leh oo ah dharka dharka loo yaqaan 'oxford linen linen', wuxuu dareemaa raaxo, culeys khafiif ah, xirmo u adkeysan kara, xoqida u adkeysta iyo biyuhu. Waxaa loogu talagalay bac weyn oo awood weyn leh, bac bac ah oo qoyan oo qalalan iyo bac kabo gooni ah, oo si fudud u keydin kara boorso kasta. Sahay safar oo kala duwan.
Boorsada jimicsiga jimicsiga ee boorsada birta ka celisa miyuusigga yoga culus
Qaab dhismeed gudaha ah oo aad u ballaadhan oo ballaadhan, oo kaydin kara oo qaadi kara dharka, taleefannada gacanta, kumbuyuutarrada, fiilooyinka, iwm., Oo aad ugu habboon isticmaalka iyo maareynta alaabooyinka wanaagsan. Adeegsiga zippers tayo sare leh, naqshad laba jibaarane ah oo madax ah, furfurnaan iyo furitaan, ma fududa in miridhku gaadho. Xadhig raaxo leh oo raaxo leh, ku habboon oo wax ku ool ah. Awood adag iyo isku xir caag adag oo balastig ah, aad u waari.
Boorsada gacanta lagu qaato ee biyaha-fudud ee biyaha-adag ee ragga iyo dumarka ayaa boorsada weyn ee bacda kabaha madax-bannaan
Boorso wanaagsan, boorsada boorsada gacanta ayaa muhiim ah. Dhererka suunka gacanta ee boorsada safarkaani waxay ku fidsan tahay ilaa gunta shandada, isu badasho culeyska jirka kala badh jirka bacda, kaas oo aan kaliya aheyn mid adag oo waara laakiin sidoo kale kordhiya awooda dhalida bacda.